Sida Loo Maalgaliyo $ 50k Oo Loo Helo ROI -ga Ugu Fiican | Tusaha Khubarada 2021
Bogga ugu weyn Sida Loo Maalgaliyo $ 50k Oo Loo Helo ROI -ga Ugu Fiican | Tusaha Khubarada 2021
sida loo maalgashado- $ 50k
Waa maxay sababta aadan u haysan $ 50k -kaaga Bangiga
Waxa ay tahay inaad ogaato ka hor intaadan gelin $ 50k
#1. Hayso Sanduuq Degdeg ah
#2. Bixinta Deynta
#3. Faham Farqiga u dhexeeya Maalgashiga Dadban iyo Firfircoon
Waxyaabaha Go’aamiya Sida Loo Maalgaliyo $ 50k
#1. Hadafka Maaliyadeed
#3. U dulqaadashada halista
Sida Loo Maalgaliyo $ 50k
#1. Kaydka Shakhsiyeed
#2. Curaarta Shakhsiyeed
#3. Maalgeli Hantida Ma -guurtada ah
#4. CD -yada
#5. Miisaaniyadda labada dhinac
#6. Xisaabaadka Maalgelinta Canshuurta
#7. 529 Qorshaha Kaydinta Kulliyadda
#8. ETF -yada
#9. Maalgeli Hawlgabkaaga
#10. Maalgeli La -taliyaha Robo
Waxaa Jira Siyaabo Badan Oo Loogu Maalgelin Karo $ 50k
Ogaanshaha sida habboon ee loo maalgashado $ 50k waa mid ka mid ah siyaabaha adag ee lagu dhisi karo hanti fog. Waa inaad awood u yeelatid inaad dhisto durdurro badan oo dakhli ah haddii aad rabto inaad abuurto hanti, intaad xoogga saarto qaybaha kale ee nolosha.
Marka, haddii aad ka hesho $ 50k oo dheeraad ah dhammaan kharashyada iyo biilasha, su'aasha ugu weyn ayaa ah maxaad ku samayn doontaa taas oo lacagta ku dhufan karta.
Guud ahaan, jawaabta su'aashani waxay noqon doontaa maalgelin. Laakiin sidee ku ogaataa waxa la maalgashanayo?
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa siyaabaha ugu wanaagsan ee loo maalgashan karo $ 50k iyo arrimo suuragal ah oo saamayn kara go'aankaaga maalgashi.
Akhri si aad wax badan uga ogaato.
Bangiyadu waa hay'ado maaliyadeed oo loo dhisay inay kaa caawiyaan kaydinta lacagtaada. Waxay kuu ballan qaadayaan ammaankaaga ugu sarreeya ee lacagtaada, mararka qaarkoodna waxay yiraahdaan waxay ku siin doonaan dulsaar lacagtaada haddii la keydiyo muddo dheer.
Sidoo kale, waxay u isticmaalaan tartamada iyo barnaamijyada abaalmarinta ku guuleysta dhiirigelin si ay kaaga dhigaan inaad lacagtaada haysato waqti dheer. Iyo inta badan, way shaqaysaa.
Waa kuwan waxa ka hooseeya intaas oo dhan.
Bangiyadu waxay isticmaalaan lacagteenna si ay macaash dheeraad ah u helaan. Waxay siiyaan lacag caddaan ah amaah ahaan waxayna ilaashadaan danaha ay keensadaan. Markaa, waa ammaan in la yiraahdo waxay naga iibiyaan muraayad.
Sababtoo ah ma helno danaha lacagta. Tanina si uun bay noo dareensiisaa khiyaano.
Laakiin mar labaad, bangigu maahan urur samafal. Waa meherad. Hal shay oo la jaanqaada ganacsiyada ayaa ah in loo aasaasay inay yihiin il dakhli. Bangiyada lagama tagin, maaddaama ay tahay in ay iyagu dakhli sameeyaan.
Tani waa sababta ay khubaradu kugula taliyaan in beddel wanaagsan oo aad kaga tagto $ 50k -kaaga bangiga ay tahay maalgelinta lacagtaada iyada oo loo marayo mareegaha talo bixinta ama raac xeeladaha si dhaqso ah looga doodi doono.
Kahor intaadan maalgelin $ 50k, waxaa muhiim ah inaad xajisato oo aad si qoto dheer u falanqayso dhaqaalahaaga. Si kale haddii loo dhigo, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dhaqaalahaagu hagaagsan yahay, oo aadan samaynayn khalad dhaqaale oo aad u weyn.
Hoos waxaa ku yaal dhowr fikradood oo la gudboon ka hor intaadan gelin maalgashiga.
Akhri ALSO: Sida Loo Maalgaliyo Sanduuqa Hedge Sanadka 2021 | Waxyaabo Hubaal ah Waa inaad Ogaataa
Miisaaniyadda deg -degga ah sida magacu tilmaamayo macnaheedu waa lacag aan la taaban oo lagu keydiyay meel ammaan u ah ujeeddooyin degdeg ah. Sida habboon, waa inay ahaataa qiyaastii saddex illaa lix bilood oo kharash ah.
Waxaad ku maalgelin kartaa lacagtan meel aamin ah oo dareere ah sida koontada kaydka, ama suuqa lacagta ama gaari kasta oo dareere ammaan ah oo habboon.
Lacagtan ha ahaato mid ammaan ah oo ha ku qaadin wax khatar ah.
Deyn baad yeelan kartaa oo waxaad rabtaa inaad $ 50k meel ku maalgashato. Waxa caqliga leh in la sameeyo waa in la bixiyo deyntaada gaar ahaan haddii ay leedahay dulsaar sare.
Tusaale ahaan, haddii aad leedahay deynta kaarka deynta oo ah $ 50,000 oo ah dulsaar dhan 30%, bixinta deyntaas waxay asal ahaan bixisaa 30% soo celinta lacagtaada.
Intaa waxaa sii dheer, bixinta deyntaada waxay ku siinaysaa xorriyad maaliyadeed si aad u gasho meherado kale.
Waxaa jira laba siyaabood oo loo maalgashado: Maalgelin firfircoon iyo mid dadban. Maalgelinta firfircoon, qof ayaa kuu maamula faylalkaaga. Waxay go'aan ka gaaraan maalgelinta, iibsashada, iyo iibinta saamiyada hadba sida loogu baahdo.
In kasta oo maalgelinta dadban dhinaca kale sida caadiga ah ay ka mid yihiin isku -darka lacago is -dhaafsi ah ama ETF -yo wayna ka dhib yar tahay.
Maalgelinta dadban iyadoo la adeegsanayo sanduuqa wadaagga ah ee ETF ama ETF waxay noqon kartaa hab faa'iido leh oo lagu maalgelin karo $ 50,000. Maal-galiyuhu wuxuu dooran karaa dhawr maaliyadood oo daboolaya saamiyada ama tusaha debaajiga si uu si fudud ugu dhiso faylalka tacliimeed ee kala duwan.
Doorashada u dhaxaysa maalgelinta firfircoon iyo tan dadban waa inaysan noqon mid-ama go'aan. Isku -darka labada isku -dhafan ayaa sidoo kale noqon kara xeelad wanaagsan.
Akhri ALSO: Sida Loo Maalgaliyo Saliida Lacag Yar
Waxaa jira dhowr arrimood oo go'aamin doona sida loo maalgashado $ 50k. Qaarkood waxaa ka mid ah;
Hadafka maaliyadeed ee aad hiigsaneyso inaad ka hesho maalgashiga $ 50,000. Maxaad damacsan tahay inaad ka hesho lacagtan $ 50,000? Miyay tahay uun si loo kala duwo faylalka maalgelintaada, ama si aad guri u hesho ama loo isticmaalo sanduuqa hawlgabkaaga?
Waqtigu wuxuu door weyn ka ciyaaraa go'aaminta sida aad u maalgashato $ 50k. Ma rabtaa in lacagtaada lagu soo celiyo saddex toddobaad ama bil gudaheed? Haddii aad sidaas samayso, waxaad u badan tahay inaad iska ilaaliso xeeladaha sida aadka ah u maal galiya saamiyada.
Haddii maalgashigaagu yahay hawlgab, wakhtigaaga ayaa saamayn doona da'daada iyo sannadaha u dhexeeya hadda iyo markaad qorshaynayso inaad hawlgab noqoto. Waqtiga badan ee u dhexeeya hadda iyo da'da hawlgabkaaga, waqtigaaga ayaa badan.
Maalgashigu wuxuu ku saabsan yahay qaadashada halista. Tani waxay si fudud uga dhigan tahay, inta aad lacag geliso si aad lacag badan u samaysato, waa inaad sidoo kale ogaataa inta lacagtaada ah ee aad awoodi karto inaad lumiso.
Tusaale ahaan, haddii adiga oo aan lahayn $ 50,000 aadan awoodi doonin inaad bixiso deynta guriga ee bisha soo socota, markaa waxaad leedahay heer aad u hooseeya. Sidaa darteed, waxaad dooni lahayd inaad lacagtaada dhigto meel ka khatar yar.
Waxaad eegtaa liiska 10 khatarta ugu hooseysa ugu fiican, kaydka abaalmarinta sare in la maalgashado.
Duruufuhu waa arrimo go'aaminaya inta aad hadda haysato, inta aad mustaqbalka yeelan doonto, iyo inta aad rabto in aad lumiso.
Xaaladaha sida da'daada, xaaladda caafimaad, heerka dakhliga, xaaladda guurka, iyo badbaadinta nolosha ayaa go'aamin doonta ilaa xad haddii maalgelinta $ 50k ay tahay fikrad wanaagsan xilligan.
Awoodda aad u leedahay in aad xakamayso oo aad maamusho shucuurtaada ayaa wax badan ka tari doonta tilmaanta meesha ay tahay inaad maalgashato. Waxa ugu dambeeya ee aad rabto inaad sameyso ayaa ah inaad bilowdo ganacsi adiga keligaa oo aad ku dambayso iibinta argagaxa ama iibsashada marka suuqa uu hoos u dhaco.
Maalgashi kasta oo ah mid aan xasilloonayn wuxuu u baahan doonaa xoog xoog leh oo ku dheggan istaraatijiyadda maalgashigaaga ilaa xilliyada hoose.
Akhri ALSO: 21 -ka Madal ee Crowdfunding ugu sarreeya ee dhammaan Dalalka sannadka 2021 -ka
Iyada oo ku xiran hadafkaaga, waxaa jira dhowr ikhtiyaar oo adag oo lagu maalgelin karo $ 50k. Xusuusnow, waa inaad marka hore go'aamisaa heerka dulqaadkaaga halista oo aad go'aansato meesha aad rabto inaad maalgashato.
Hoos waxaa ah toban siyaabood oo lagu maalgelin karo $ 50k.
Kaydka shaqsiyeed micnaheedu waa maalgelinta shirkad gaar ah. Faa'iidadaada ama khasaarahaaga maalgashigaas waxaa go'aamiya waxqabadka shirkadda iyo kaydkeeda.
Tusaale ahaan, haddii aad maalgashi ku samayso Apple, waxaa jirta fursad aad u saraysa oo aad ku kasban lahayd macaash aad u weyn. Laakiin haddii shirkadda aad maalgashato ay la kulanto xoogaa dhibaatooyin dhaqaale ah, markaa maalgashigaagu wuxuu hoos u dhici karaa qiimaha.
Kaydku wuxuu fursad u siiyaa faa'iidooyinka raasumaalka iyada oo loo marayo qiimeynta qiimaha iyo xaaladaha qaarkood, dakhliga saami qaybsiga sidoo kale. Guud ahaan, saami qaybsiga waxaa la bixiyaa saddexdii biloodba mar.
Waxaad ku maalgashan kartaa saamiyada shaqsiyeed iyo saamiyada jajabka iyada oo loo marayo xisaabaadka dilaalnimada ee kala duwan.
Curaarta waa aaladaha deynta. Asal ahaan, maalgeliyuhu wuxuu deyn siiyaa deyn -bixiyaha si uu u bixiyo dulsaar xilliyeedka ka dibna qiimaha wejiga debaajiga marka curaarta bislaato.
Bondadu waxay ku yimaadaan dhawr nooc sida;
Xiriirka shirkadaha - Curaarta shirkadaha waxaa bixiya shirkado kala duwan. Ammaankoodu qayb ahaan wuxuu ku salaysan yahay xaaladda maaliyadeed ee soo -saaraha iyo awoodda ay u leeyihiin inay bixiyaan dulsaarka iyo inay dib u furaan curaarta markay weynaadaan.
Curaarta degmada - Curaarta dawladda hoose waxaa bixiya hay'adaha dawliga ah iyo kuwa dawladda hoose. Dulsaarka curaartaan guud ahaan waa laga dhaafay canshuurta federaalka.
Dammaanadaha khasnadda -Khasnadaha waxay ku yimaadaan dhowr qaan-gaar ah waxaana loo tixgeliyaa hanti aan khatar lahayn maxaa yeelay waxaa taageera Maaliyadda Mareykanka.
Ikhtiyaar kale oo lagu maalgelin karo $ 50k -gaaga ayaa ah hantida maguurtada ah. In kasta oo $ 50k aysan ku filnayn in lagu iibsado hanti maalgashi ama meel lagu noolaado, waxay ku filan tahay bixinta hoosta.
Haddii kale, waxaad ku maalgelin kartaa hantida maguurtada ah REIT oo loo yaqaan Real Estate Investment Trust. REITs sida caadiga ah waxaa si guud looga ganacsadaa sida saamiyada sarrifka saamiyada, laakiin qaar baa si gaar ah loo ganacsadaa.
Maalgashiga REIT waxaa ka mid ah dhismayaasha xafiiska, meelaha tafaariiqda, guryaha la deggan yahay, amaahda guryaha, ama qaar ka mid ah kuwaan.
Ikhtiyaar kale oo lagu maalgelin karo Hantida Ma -guurtada ah waa iyada oo la adeegsanayo aaladaha dadku ku badan yihiin. Iibinta hantida maguurtada ah waxay siisaa maalgashadayaasha yaryar fursad ay ku iibsadaan heshiiska hantida saamilay ahaan.
Sida maalgelin kasta, si fiican u samee shaqada guriga ka hor intaadan dooran ikhtiyaarka aad ku maalgelin karto.
Akhri ALSO: Sida Lacag Loogu Sameeyo 50000 oo Doollar Sannadka 2021: Hagaha Tallaabo-Tallaabo ah
CD-yada, oo loo yaqaan Shahaadada Lacag-dhigashadu waa baabuurta kaydka caymiska FDIC-ga ee la dejiyay muddo cayiman, sida lix bilood, sannad, laba sano, ama ka badan. Haddii aad ku guuldarraysato inaad lacagtaada uga tagto CD -ga muddada la cayimay, waxaad la kulmi doontaa ciqaab bixitaan hore.
Istaraatiijiyada caqliga leh ee CD -ga ayaa ah inaad jaranjarada qaangaarka si aad mar walba u yeelato mid ka mid ah waqtiyada qaar adiga kugu habboon, sida lixdii biloodba mar.
Bangiyada, shirkadaha dillaalka iyo hay'adaha maaliyadeed ayaa badiyaa bixiya CD -yada.
Guud ahaan maalgalinta labada dhinac waxay ururiyaan lacagta maalgashadayaasha si ay u maal gashadaan istaraatijiyad ama dabaqad hanti gaar ah.
Tani waxay noqon kartaa saamiyada ama curaarta, ama fasallada hantida hoose ee ku jira qeybahaan ballaaran. Miisaaniyadda labada dhinac ayaa inta badan ah maalgelinta doorashada 401 (k) qorshayaasha.
Intaa waxaa dheer, maaliyadaha wadaagga ah waxay noqon karaan maaliyad tilmaamaysa dadban oo la socota tusmada suuqa sida S&P 500. Intaa waxaa sii dheer, maaliyadaha tusmada badanaa waa kharashyo jaban.
Miisaaniyadda labada dhinacba si firfircoon baa loo maamuli karaa, taas oo macnaheedu yahay in maamuluhu sameeyo go'aanno firfircoon oo saamayn ku leh dammaanadaha uu sanduuqa hayo.
Ikhtiyaar kale oo aad dooran karto iyada oo ku xidhan duruufahaaga ayaa ah inaad furato koonto dilaalnimo oo cashuur laga qaadi karo ama koonto la leh shirkad maaliyad wadaag ah.
Xisaabaadyadani waxay siiyaan heer wanaagsan oo kala -duwanaansho kuwa leh maalgelin ku filan xisaabaadka hawlgabka waxayna noqon karaan dareere badan haddii loo baahdo.
Maalgashiga lagu sameeyay IRA ama nooc kale oo ah hawlgab hawlgab ayaa laga yaabaa in lagu qaado canshuuro lagu daray 10% ganaax ah haddii lacagaha lagala baxo kahor da'da 59½.
Isticmaalka qaar ka mid ah ama dhammaan $ 50k -kaaga si aad u abuurto oo u maalgeliso 529 Qorshaha Kaydka Kulliyadda carruurtaada waxay u noqon kartaa maalgelin wanaagsan mustaqbalkooda.
Qorshayaashan waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo kharashka waxbarashada, hoyga, buugaagta, iyo kharashyo kale oo badan oo kuleejka ah. Gobolo badan ayaa bixiya dhiirigelin canshuureed oo dheeraad ah dadka deggan gobolkaas.
Qorshaha Kaydka Kulliyadda ee 529 wuxuu bixiyaa ikhtiyaarro maalgelin oo kala duwan. Qorshayaal badanina waxay bixiyaan ikhtiyaar ku saleysan da'da oo beddelaya isku-darka maalgashiga marka ka-faa'iideystuhu uu ku dhowaado da'da 18.
Akhri ALSO: Maxaan Ku Maalgashan Karaa 100 Doollar? Talada Khubarada ee 2021
ETF-yada ama Sanduuqyada Ganacsi-isweydaarsiga waxay aad ugu eg yihiin maalgalinta labada dhinac laakiin waxaa loo kala iibsadaa sida kaydka. ETF -yo badan ayaa ah maaliyadaha tusmada oo guud ahaan waxay leeyihiin saamiyada kharash yar.
Hantidoodu waa mid hufan maalin kasta. Halka maalgalinta labada dhinac, dhinaca kale, ay soo sheegaan hanti -dhawrka kaliya laba jeer sannadkii.
Waxaa jira ETF -yo badan oo laga dooran karo. Meelaha maalgashiga onlaynka ah ayaa si gaar ah qiimo ugu leh ogaanshaha ETF -yada ay iibsan doonaan, iyo sida loogu kala qaybin lahaa faylalkaaga dhexdooda.
Waqtiga ugu fiican ee la bilaabi karo kaydinta hawlgabkaaga waa shalay. Ku maal geli koontadaada hawlgabka si aad u xoog badan intii aad awooddo. Waxaad ku maalgashan kartaa hawlgabkaaga xisaabaadka hawlgabka sida IRA ama 401 (k)
Waxtarka IRA: Xadka tabarucaadka sannadka 2021 iyo 2020 ee koontada IRA waa $ 7,000 iyo $ 46,000 kuwa jira 50 sano ama ka weyn. Waxaad awoodi kartaa inaad wax ku biiriso IRA haddii dakhligaagu ka hooseeyo xadka.
Wixii macluumaad dheeraad ah, tan akhri 401K VS IRA: Waa 401k waa IRA | Isbarbardhig Buuxda Iyo Wax La Mid Ah
Loo-shaqeeyaha kafaala qaaday 401 (k): Haddii shirkaddaadu bixiso 401 (k) oo u dhiganta tabarucyada shaqaalaha markaa waa inaad wax ku biirisaa. Xadka tabarucaadka sanadlaha ah ee 401 (k) xisaabta 2021 iyo 2020 waa $ 26,000 iyo $ 19,500.
Markaa, waxaad u adeegsan kartaa $ 50k-kaaga si aad ugu darsato xaddiga ugu badan 401 (k) ama xisaabaadka hawlgabka ee kale ee uu kafaalo qaaday.
Tani waxay kordhineysaa qaddarka aad u keydsato hawlgabka. Oo waxay kaa caawineysaa hubinta inaad hesho isugeynta loo shaqeeyaha oo buuxa haddii mid la siiyo.
Ogow macluumaad intaas ka badan adiga oo tan akhriya Miyaan ku maal galiyaa 401k? Maxay tahay inaan ogaado 2021
Mid ka mid ah habka ugu fudud ee lagu maalgelin karo $ 50k -kaaga waa la -taliye robo. Lataliyaha robo waa badeecad maalgashi oo cusub. Guud ahaan, waxay ku maalgashadaan ETF -yo kala duwan iyagoo ku matalaya, kuna saleysan baahiyahaaga gaarka ah iyo dulqaadka halista.
Qaar ka mid ah la -taliyayaasha robo ayaa isku dheelitir kugu sameeya, oo kuu oggolaanaya raaxada nasashada iyo u oggolaanshaha lacagtaada inay kuu shaqeyso.
Shirkadaha sida Wealthfront iyo Fiicnaan ku guuleysto tartanka sida lataliyayaasha Robo ugu fiican.
Waxay leeyihiin algorithm kombiyuutar oo sameeya dhammaan shaqada maareynta wasakhda ah laakiin safka hore waxaa ku jira la taliyayaal bini'aadan oo si taxaddar leh u sharxaya talooyinka ay soo jeediyeen kombiyuutarrada, waxayna sameeyaan hagaajin ku saleysan ra'yi -celintaada.
Qaybta ugu fiican ee ku saabsan la -taliyayaasha Robo waa qiime jaban. Lacagtaada $ 50,000 ee ka badan waxay buuxinaysaa shuruudaha dheelitirka ugu yar labadaba.
Haddii aad haysato $ 50,000 oo dheeraad ah oo aad kaga tagto maalgashi, waxaa jira xulashooyin badan oo la tixgelin karo. Ikhtiyaarka aad aakhirka aadayso waxay ku xidhan tahay xaaladdaada dhaqaale iyo mudnaantaada.
Intaa waxaa sii dheer, maalgaliye ahaan, waa inaad ka faa'iideysataa lacag kasta oo dheeri ah si kor loogu qaado booskaaga maaliyadeed.
Sida Loo Maalgashado: Hagaha Bilowga ah ee Maalgelinta Suuqa Suuqa 2021
Maxay Ka Dhigan Tahay Haysashada Gaaban | Tilmaan Buuxo
15 Shabakado Bilaash ah oo loogu talagalay Dadka Jecel Buugga 2021 | Hel Helitaan cusub
10 Agab Software Software Sirdoonka Ganacsiga ugu Fiican 2021
13 Sawir -qaadayaasha Lacag -La'aanta Ugu Fiican Sanadka 2021 -ka
Jadwalka Mawduucyada Qarso Waa Maxay Baadhaha Saamigu? Sidee buu u shaqeeyaa Baadhaha Saamigu?
Kahor intaadan maalgelin Ethereum- Tani waa waxa aad wajahayso 2021
Jadwalka Mawduucyada Qari Waa maxay Ethereum? Tilmaan-tallaabo Tusaha Sida Loo Furo Koontada Ethereum#1. Tallaabada koowaad:#2. Labaad…
Sida Loogu Iibsado Monero Si Faa'iido Leh 2021 MarketCap, Macluumaad
Jadwalka Tusmada Qarso Waa maxay Monero (Qadaadiic XMR)? Halkee laga Iibsanayaa Monero? Sida Loo Iibsado Monero (XMR) Tallaabada 1:…
Sida Loo Dhiso Jaranjarada CD -ga Sannadka 2021 | Tilmaan-Talaabo Talaabo Talaabo Fudud
Jadwalka Mawduucyada Qari Waa Maxay Jaranjarada CD -ga? Maxaan U Dhisayaa Sallaan CD? Sida Loo Dhiso A…
Jadwalka Mawduucyada Qari Jadwalka Macluumaadka Maxaad ugu Baahan Tahay App Maalgelin Maxay yihiin Barnaamijyada Maalgelinta ee ugu Fiican…
Jadwalka Mawduucyada Qari Waa Maxay Hindise Sharciyeedka Maaliyadda Nigeria? Sidee bay Biilasha Maaliyaddu uga shaqeeyaan Nigeria?
1Fikradaha Dakhliga Dadban